इङ्लिश फुटबललाई मर्मत नगरे बर्बादै हुन्छ – हड्सन
२०७३ असार १५ बुधबार, इङ्ल्याण्ड । इङ्लिश फुटबल टिमका निवर्तमान म्यानेजर रोय हड्सनले इङ्ल्याण्ड टिमलाई छिट्टै मर्मत नगरे फुटबल नै खत्तम भएर जाने भविष्यवाणी गरेका छन् । गत सोमबार फ्रान्समा जारी युरो कप फुटबलको प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै इङ्ल्याण्ड बाहिरिएपछि तत्काल राजीनामा दिएका ६८ वर्षीय रोयले टिमको तत्काल मर्मत नगरे यसले दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । युरोकपको प्रिक्वार्टरफाइनलमा टिमले १–० ले अग्रता लिएरसमेत पहिलो पटक युरोकप खेलिरहेको आयरल्याण्डसंग&nb ... बाँकी अंश»
कस्ले गुमाए क्वार्टरफाइनल ? : पहेंलो कार्डको ‘वार्निङ’ खाने इट्लीकै ११ जना
२०७३ असार १४ मंगलबार, एजेन्सी । फ्रान्समा जारी युरोकप फुटबलका क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा हुँदा रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ । विश्व फुटबल पावर हाउस एवं डेफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेन, बलियो प्रतिस्प्रर्धी इङ्गल्याण्ड जस्ता मुलुक नकआउट चरणबाटै बाहिरिएका छन् । पहिलो पटक सहभागिता जनाएको आइसल्याण्ड क्वार्टर फाइनल पुगेको छ । यस्तै क्वार्टरफाइनल खेल्न पाउने र नेपाउने खेलाडीको चर्चाले समेत युरोकपको गर्मी बढेको छ । बेल्जियमबाट थोमस भर्मलेन, आयोजक फ्रान्सबाट निगोलो कान्टे ... बाँकी अंश»
मेसीलाई राष्ट्रिय टिम नछोड्न अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिको आग्रह
२०७३ असार १४ मंगलबार, ब्युनर्स आयर्स। अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मौरिसियो मेक्रीका र महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाले लियोनल मेसीलाई सोमबार भएको कोपा कप फुटबलको प्रथम स्थानका लागि भएको चिलीसंगको खेलमा अर्जेन्टिनाको निराशाजनक हारपछि राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट नखेल्ने गरी लिएको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अर्जेन्टिनी फुटबल टिमका क्याप्टेन तथा बार्सिलोनाका सुपरस्टार फुटबलर मेसीले हारपछि सन्यासको घोषणा गका हुन् । प्रथम स्थानका लागि भएको प्रतिस् ... बाँकी अंश»
डोल्मा र भावना सेमिफाइनलमा
२०७३ असार १४ मंगलबार, काठमाडौं । डोल्मा लामा र भावना सुनुवार ओलम्पिक डेका अवसरमा आयोजित स्क्वास प्रतियोगिताको महिला सिंगल्सतर्फ सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । डोल्माले मंगलबार मुस्कान राउतलाई ११–६, ११–५ र ११–७ तथा भावनाले साइसा सुनवारलाई ११–१, ११–३ र ११–२ को सोझो सेटमा पराजित गरिन् । पुरुष सिंगल्समा अरहान्तकेशर सिंह र अमृत थापा मगर अन्तिम चारमा पुगे । अरहान्तले सिबु थापालाई ११–५, ११–४ र ११–५ तथा अमृतले सुगम तुल्सानलाई ११–५, ११–६ र ११–५ को सीधा सेटमा हरा ... बाँकी अंश»
आईसल्याण्डसँग हारेपछि इङ्गल्याण्डका प्रशिक्षक हड्ज्सनले राजीनामा दिए
२०७३ असार १४ मंगलबार, एजेन्सी । राष्ट्रिय फुटबल टोली युरोकपको अनकआउट चरणबाटै बाहिरिएपछि इङ्गलिश टोली इङ्गल्याण्डका प्रशिक्षक रोय हडज्सनले राजीनामा दिएका छन् । आज विहान भएको नकआउट चरणको अनितम खेलमा इङ्गल्याण्ड आइसल्याण्डसंग २–१ ले पराजित भएपछि हड्ज्सजनले राजिनामा दिएका हुन् । हड्ज्सनले भनेका छन्, ‘मलाई माफ गर्नुस्, म यो बाटो छोड्न चाहन्छु, यस्तो भइरहन्छ ।’ उनले अझै पनि इङ्गल्याण्ड कुनै मुख्य फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनलमा पुग्ने विश्वास गरेका छन् । प्रग ... बाँकी अंश»
युरो २०१६: क्वार्टरफाईनल खेलमा को को भिड्दैछन्? (समय तालिका)
२०७३ असार १४ मंगलबार, काठमाडौ। राउण्ड अफ सिक्सटिनका खेलहरु सकिएका छन्। फ्रान्समा जारि युरो २०१६को क्वार्टरफाईनल खेलका समिकरण बाहिर आएको छ। क्वार्टरफाईनल पुग्ने आठ टोलीहरुमा पोर्चुगल, पोल्याण्ड, वेल्स, बेल्जियम, जर्मनी, ईटली, फ्रान्स र आईसल्याण्ड रहेका छन्। पहिलो पटक पोल्याण्ड, वेल्स र आईसल्यान्ड युरोको क्वार्टरफाईनलमा प्रवेश गरेका टोली हुन्। वेल्स र आईसल्याण्ड युरो फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागी टोली हुन्। वेल्स रआईसल्याण्डको प्रतियोग ... बाँकी अंश»
ईङल्याण्डलाई स्तब्ध पार्दै आईसल्याण्ड क्वार्टरफाईनलमा
२०७३ असार १४ मंगलबार, काठमाडौं। पहिलो पटक युरो खेलिरहेको आईसल्याण्डले बलियो मानिएको ईङल्याण्डलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै क्वार्टरफाईनल प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठुलो उलटफेर अन्तर्गत ईङल्याण्ड बाहिरिएको हो। उक्त हार पछि ईङल्याण्डका म्यानेजर रोय हडसनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन्। आईसल्याण्डले क्वार्टरफाईनलमा आयोजक फ्रान्सको सामना गर्ने छ। खेलको चौथो मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै ईङल्याण्डले १-०को अग्रता िएको थियो। उसका ... बाँकी अंश»
साविक विजेता स्पेन युरोकपको प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरियो
२०७३ असार १३ सोमबार, फ्रान्स । साविक विजेता स्पेन युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । राउण्ड अफ सिक्सटिनको खेलमा इटालीसंग २–० ले पराजित गर्दै स्पेनलाई स्तव्ध पारेको हो । ईटलीले क्वारट्रफाईनलमा विश्वकप २०१४ बिजेता जर्मनीको सामना गर्ने छ। खेलको ३३ औं मिनेटमा जर्जिओ चिलेलिनीको गोलबाट अग्रता लिएको इटालीलाई ९० औं मिनेटमा ग्राजिआनो पेल्लेले अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए । खेलमा दुवैतर्फ गोल गर्ने थुप्रै अवसरलाई गोलकिपरहरुले निस्तेज ... बाँकी अंश»
आर्मी र लुम्बिनी ललित स्मृति यु–१८ फुटबलको उपाधिका लागि भिड्ने
२०७३ असार १३ सोमबार, काठमाडौं, त्रिभुवन आर्मी क्लव र लुम्बिनी फुटबल क्लव ललित स्मृति यु–१८ फुटबल प्रतियोगिताको उपािधका लागि भिड्ने भएका छन् । सेमिफाइनलमा लुम्बिनीले संकटा क्लवलई १–० ले पराजित ग¥यो । लुम्बिनीलाई जिताउन मन्दिप थापाले ८६ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । त्यस्तै आर्मीले दोस्रो सेमिफाइनलमा झापा ११ लाई २–१ ले पराजित ग¥यो । आर्मीलाई जिताउने क्रममा दोर्जे तामाङ्ग र प्रेजेन तामाङ्गले एक एक गोल गरे । झापाका लागि विश्वहाङ राईले सान्त्वना गोल फर्काए । ... बाँकी अंश»
पोर्चुगललाई गलाएको आइसल्याण्ड इङ्गल्याण्डलाई चुनौती
२०७३ असार १३ सोमबार, काठमाडौं । फ्रान्समा जारी युरोकप फुटबलमा राउउण्ड अफ सिक्सिटिनको अन्तिम खेलमा इङ्गलिश टोली इङ्गल्याण्ड र आइसल्याण्ड भिड्दै छन् । राति पौने १ बजे हुने खेलमा दुवै क्वार्टर फाइनल पुग्ने दाउमा हुने छन् । यी दुईबीचको खेल संगै क्वार्टरफाइन पुग्ने सबै टोलीको टुंगो लाग्ने छ अर्थात् क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा हुने छ । यस्तै, इङ्गलिश क्लबका खेलाडीले भरिएको इङ्गग्ल्याण्डलाई बलियो मानिए पनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित फुटबल खेलेको आइसल्य ... बाँकी अंश»
युरोको बहुप्रतिक्षित खेलमा स्पेन र ईटली भिड्दै
२०७३ असार १३ सोमबार, काठमाडौं। स्पेन र ईटली युरोपका दुई ठुला टोली 'राउण्ड अफ सिक्सटिन' अन्तर्गत आज राती नेपाली समय अनुसार ९:४५ बजे भिड्दैछन्। सन् २००६को विश्वकप बिजेता ईटली र सन् २०१०को विश्वकप बिजेता स्पेन बिचको खेल संभवत: युरो २०१६को सबैभन्दा रुची राखेर हेरिने खेल हुनेछ। स्पेनले सन् २००८ र २०१२को युरोको उपाधि जितेको थियो। स्पेन उक्त उपाधी जोगाईराख्नकालागि खेल्ने छ भने ईटली पनि युरोको दावेदार टोली हुनाले आफ्नो दावेदारी कायम राख्नकालागि खेल्ने छ। स्प ... बाँकी अंश»
अर्जेन्टिनाका स्टार मेस्सीको अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा
२०७३ असार १३ सोमबार, एजेन्सी। अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सीले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। कोपा अमेरिकाको फाईनलमा पराजित भएपछि अर्जेन्टिनी मिडिया टिवाईसी स्पोर्ट्सलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। अर्जेन्टिनी फुटबल सँघसँगको सम्बन्ध राम्रो नरहेका मेस्सीले फाईनलमा हारेपछि सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। उनका प्रशंसकहरुले भने उनले आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्ने विश?वास गरेका छन्। कोपा अमेरिकाको ... बाँकी अंश»
मेस्सीले पेनाल्टी 'मिस' गर्दा कोपा अमेरिकाको उपाधि चिलीलाई
२०७३ असार १३ सोमबार, काठमाडौं। अर्जेन्टिनालाई हराउँदै चिली लगातार दोस्रो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि जित्न सफल भएको छ। निर्धारित समय र थप समयमा गोल रहित बराबरी रहेको खेल पेनाल्टी शूट आउटमा पुगेको थियो। पेनाल्टी शुट आउटमा अर्जेन्टिनालाई ४-२ गोलले पराजित गर्दै चिलीले उपाधी जितेको हो। अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले पेनाल्टी पोष्ट बाहिर हानेका थिए। त्यसैगरि विडालको पेनाल्टी अर्जेन्टिनाका गोलरक्षकले रोकेका थिए। अर्जेन्टिनाका लुकास बिजिलाको पेनाल् ... बाँकी अंश»
बेल्जियमले क्वार्टरफाईनलमा वेल्स भेट्ने
२०७३ असार १३ सोमबार, काठमाडौं। बेल्जियमले हंगेरिलाई ४-० गोलले पराजित गर्दै क्वार्टरफाईनलमा प्रवेश गरेको छ। बेल्जियमको लगातार आक्रमणलाई हंगेरीले थेग्न सकेको थिएन्। खेलको १०औं मिनेटमा टोबी अल्डरवेर्ल्डले गोल गर्दै बे्जियमलाई खेलमा १-०को अग्रता दिलाएका थिए। फहिलो हाफ १-०मा सकिएको थियो। खेलको ७८औं मिनेटमा मिची बात्शुईले दोस्रो गोल गरेका थिए भने ८०औं मिनेटमा एडेन हजार्डले गोल गरेका थिए। त्यसैगरि खेलको अन्तिम मिनेटमा फरेरा कर्रास्कोले चौथो गोल गरेका थ ... बाँकी अंश»
क्वार्टरफाईनलमा जर्मनीले स्पेन वा ईटलीसँग खेल्ने
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं। विश्व कप फुटबल २०१४को बिजेता जर्मनीले राउण्ड अफ सिकस्टिनमा स्लोभाकियालाई ३-० गोलले हराउँदै क्वार्टरफाईनलको यात्रा तय गरेको छ। खेलको ८औं मिनेटमा जेरोमी बोएटिङले गोल गर्दै जर्मनीलाई १-० गोलको अग्रता दिलाएका थिए। मारिओ गोमेजले ४३औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेर अग्रता २-० पारेका थिए भने जुलियन ड्राक्सलरले ६३औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरेका थिए। राम्रो लयमा देखिएको जर्मनीले खेलमा पुरै नियन्त्रण राकेको थियो। स्लोभाकियाका खेलाडीहरु ... बाँकी अंश»
ग्रीजम्यानको आकर्षक दुई गोलले फ्रान्स क्वार्टरफाईनलमा
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं। युरो २०१६को आयोजक फ्रान्स आयरल्याण्डलाई पराजित गर्दै क्वार्टरफाईनल प्रवेश गरेको छ। आयरल्याण्डलाई २-१ गोलले पराजित गरेपछि फ्रान्सको क्वार्टरफाईनल यात्रा तय भएको हो। एक गोलले पछि परेको स्थितीबाट २-१को बिजय हात पार्न फ्रान्सका एन्टोनी ग्रीजम्यानले दोस्रो हाफमा २ आकर्षक गोल गरेका थिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै आयरल्याण्डका रबी ब्राडीको गोलले १-०को अग्रता लिएको थियो। खेलको ५८ र ६१औं मिनेटमा ... बाँकी अंश»
रोममा आदर्शले भेटे पेन्टाथलनको कास्य
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं । मित्र राष्ट्र इटालीको रोम शहरमा आयोजित चौथौ युलाईस ट्रफी मोर्डन पेन्टाथलनमा आदर्श कार्कीले कास्य पदक प्राप्त गरेका छन् । शनिबार भएको प्रतियोगितामा जुनियरतर्फको ई क्याटागोरीमा हिम्स स्कुलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत आदर्शले कास्य पदक प्राप्त गरे । नेपाल सहित नौ युरोपियन देशहरुका करिव ३०० खेलाडी सहभागि रहेको मोर्डन पेन्टाथलनमा नेपाली खेलाडीहरुले हासिल गरेको यो नै पहिलो पदक रहेको संघका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य रा ... बाँकी अंश»
सशक्त हंगेरीविरुद्ध १९७२ को नजिता दोहोर्‍याउला बेल्जियम
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं । फ्रान्समा जारी युरोकप फुटबलमा राउण्ड अफ् सिक्सटिनका खेलहरु भइरहेका छन् । सोमबार विहान पौने १ बजे हंगेरी र बेल्जियम भिड्दै छन् । हंगेरी समूह चरणमा अपराजित रहँदै समूह विजेता बन्दै अकआउट चरणमा पुगेको हो । उसले समूह चरणको पहिलो खेलमा अष्ट्रियालाई २–० ले हराउँदा दोस्रो खेलमा आइसल्याण्डसंग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । समूहको अन्तिम खेलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी पोर्चुगलसंग ३–३ को बराबरी गर्दै समूह विजेता बनेको हंगेरी नकआउट चरण पार गर्दै अ ... बाँकी अंश»
घरेलु मैदानमा फ्रान्सलाई टक्कर दिन तयार आयरल्याण्ड
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं। राउण्ड अफ सिक्सटिन अन्तर्गत फ्रान्स र आयरल्याण्ड बिचको खेल रोमाञ्चक हुने विश्वास गरिएको छ। समुह चरणमा ईटली जस्तो टोलीलाई हराएर दोस्रो चरणको यात्रा गरेको आयरल्याण्डले घरेलु मैदानमा खेलीरहेको फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने छ। आयरल्याण्डका म्यानेजर मार्टिन ओ'निलले भन्छन् ' हामी ईटली बिरुद्धको जितको मनोबल लिएर अघि भड्ने छौं। फ्रान्ससँग विश्वस्तिरय खेलाडीहरु रहेका छन् र हाम्रा खेलाडूहरु उनीहरु बिरुद्ध खेल्न तयार छन ... बाँकी अंश»
अन्तिम खेलमा जर्मनीलाई हराएको स्लोभाकियालाई सुखद नतिजाको आश
२०७३ असार १२ आइतबार, काठमाडौं। समुह 'सी'बाट पहिलो भएको जर्मनी र समुह 'बी'बाट दोस्रो भएर 'राउण्ड अफ सिक्सटिन'मा आमने सामने हुँदैछन्। विश्वबिजेता जर्मनी बलियो देखिए पनि स्लोभाकियाको टोलीलाई कम आंकलन गर्न सक्ने स्थिती रहेको छैन्। करिब एक महिना अघि स्लोभाकियासँग पराजित भएको जर्मनीले त्यो हार सम्झिरहने छ। स्लोभाकियाले उक्त मैत्रीपुर्ण खेलमा जर्मनीलाई ३-१ गोलले पराजित गरेको थियो। सन् २०१६ मई २९मा भएको खेलमा जर्मनी पराजित भएको थियो समुह चरणमा २ जित र १ बर ... बाँकी अंश»